दुनियाँको एक कहालीलाग्दो मृत्युले अत्यन्तै भावुक बनायो – Classic Khabar
August 21, 2021 84
“आफू सामान्य बिरामी भएको खबर कामले नेपालगन्ज गएका श्रीमानलाई पुर्‍याउछिन । ,श्रीमानले गाउको मेडिकलमा उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् । ,निको नहुदा आफू यतै छु काखको बच्चा मात्र ल्याएर आउ यतै उपचार गरेर जाँउला भनी नेपालगन्ज बोलाउछन उनका श्रीमानले । अब बाँच्ने आशा सहित उनी घरको सबै चाँजोपाँजो मिलाई एक दुधे बालक काखमा च्यापेर एक्लै नाइट बस चड्छिन उनी ।
गाडीमा चिनेको मान्छे कोहि नहुदा काखको बालकलाई नै आफ्नो रात्रिकालिन यात्राको साथी अनि बिरामी अबस्थाको साहारा सम्झदै यात्रा गरिरहेकी हुन्छिन उनी । बिच बाटामा उनलाइ उल्टि हुन्छ । ,वरपरका सबै सिटका मान्छेहरु मस्त निद्रामा हुन्छन् । उनी आत्तिन्छिन र काखको बच्चालाई ओल्टाइपल्टाई बिउझाउने कोसिस गर्दा पनि उ बिउझिदैन । ,उनलाई उकुसमुकुस हुन्छ र सोच्छिन कि बाटामा मलाई केही भैहाल्यो भने यो काखको छोरा.. ???
फेरि बच्चालाई उठाउने कोशिश गर्दा गर्दै उनलाई अन्तिम अबस्थाले च्याप्दै जान्छ र अन्तिम तागतले बच्चालाई दूध चुसाउदै भोलि बिहान सम्म बाँच्न सकु र काखको छोरालाई बुबाको जिम्मा लगाउन पाउ भन्ने कामना सहित छटपटाउदा छटपटाउदै आफू सधैको लागि निदाउछिन । बच्चा रुन थाल्छ र आसपासका सिटका मान्छेहरु बिउझेर उनलाई उठाउन खोज्दा उनी सधैको लागि निदाइसकेकी हुन्छिन । ” (फेस्बुकमा देखेको यो तस्वीर र लेखिएको शब्दहरुले मन निक्कै नै विक्षिप्त भयो ? बाँकी तस्वीर आँफै बोल्छ?)
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र ६ गते आईतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल